Ngabe umuntu angangifundisa indlela yokwengeza emuva kwe-backlink kalula ngangokunokwenzeka?
Eqinisweni, kuyindlela yokwakha esinye isixhumanisi kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi ayinzima njengoba ungacabanga. Ukuyibeka ngesiNgisi esicacile, ukwakha isixhumanisi ku-SEO kubhekisela ekusebenzisaneni okuzuzisayo. Ngamagama alula, kusho ukuthatha i-backlink ibekwe emakhasini akho bese ubanika ngokubuyisela - setting up a small company network. Eqinisweni, ukufaka isiteleka sokwakha izixhumanisi ngekhwalithi cishe kuyindlela engcono kakhulu yokuthuthukisa isu lakho jikelele ku-SEO esikalini. Kodwa ngaphambi kokukubonisa ukuthi ungangezela kanjani izinkinobho zangemuva - kalula futhi ukhululeke - ake ngikunike izwi lokuqapha. Gcina engqondweni, ukuthi amathiphu okwakha okuxhumanisa alandelayo angamaphesenti angu-100 avumelekile okwamanje. Kodwa ayikho isiqinisekiso sokuthi yini eyenza sikwazi namuhla izohlala isilingana nakusasa. Ngakho, ngezansi kukhona izinyathelo ezingokoqobo ezisebenzayo okwamanje. Ngithemba ukuthi kuzokusiza ukuthi uqonde ukuthi ungeza kanjani i-backlink kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi - ngaphandle kwemali enkulu yemali, nje ukukhokha isikhathi sakho nomzamo wakho.
I-Blog Posting Schedule
Akukho lutho olungavamile mayelana nokuthola emuva kwe-backlink ebalulekile ekwakheni okuthunyelwe kwebhulogi okuhleliwe. Konke okudingayo lapha ukubhala okuningi futhi ukwenze kaningi. Qinisekisa ukuthi izinjini ezinkulu zokusesha zizobona ngempumelelo ubukhona bakho - ungakhohlwa ukuletha izibuyekezo eziphindaphindiwe nokuqukethwe kwebhulogi yakho. Mina ngokwami ​​ngincoma ukubheja ngekhwalithi, kunokuningi. Ngisho ukuthi ukubhala izihloko ezimbili noma ezintathu zokubulala yilokho okumele kwenziwe ukuze wengeze ezinye izinto ezingezansi ezisebenzayo. Futhi khumbula - kunethuba elihle lokusebenzisa amagama akho angukhiye oyinhloko ekuthunyelwe kwebhulogi ngayinye. Futhi, yiqiniso, zama ukungaphezu kwamagama angukhiye, ngaphandle uma ufuna imibhalo yakho ibonakale njengogaxekile. Ukwenza kanjalo, cabangela ukutshala imali isikhathi esithile ekuxhumaniseni isixhumanisi nge-guest blogging, ukubhala ukubuyekezwa komkhiqizo, kanye nokuphawula okuhlakaniphile, okungenani emithonjeni yezinkampani zangaphandle zokuxhumana okuphezulu embonini yakho yebhizinisi noma ingxoxiswano engxoxweni.
Umbhalo we-Anchor kanye nokucwaninga ngegama elingukhiye
Asikho isidingo sokuthi ukuqhuba ucwaningo lwegama elingukhiye cishe kungukuqala ukuqala ukuthuthukisa i-SEO yakho esikalini. Ngokuphathelene nokwakhiwa kokuxhumanisa ngokukhethekile, kufanele wazi ukuthi ungeza kanjani ama-backlink ngombhalo we-anchor wesokudla. Ukuze uthole konke okukhona, unganqikazi ukusebenzisa i-Google AdWords noma yimuphi omunye ithuluzi lokusebenzisa ukuhlaziywa kwegama eliyisihluthulelo eliphelele futhi-ngalesi sikhathi ngokuqinile ngezinhloso zokwakha isixhumanisi. Ngokubaluleke kakhulu, uma kuziwa ekubunzeni umbhalo ophelele wokugcina i-anchor, ama-semantics enza umqondo. Isibonelo, imigomo ejwayelekile efana ne "izindleko zokumaketha ezokuxhumana nabantu" ingaba nezimfundiso ezibonakalayo ezifanayo. Noma kunjalo, umnyango uhlale uvulekile ekwandiseni ithrafikhi yakho - nje ukushintsha igama elilodwa, noma ukuthatha elifanelekayo elilodwa.
Ukuhlelwa Kwamawebhusayithi Okuqinile Nokuxhumanisa
Gwema njalo izixhumanisi zangaphakathi ezikhomba indlela ngokusebenzisa izingxenye ezahlukene zewebhusayithi yakho noma ibhulogi. Kunconywa ukuthi ungeze izixhumanisi kumakhasi avakashelwe kakhulu, bese usethe uxhumano olufanele nekhasi lakho eliyisiqalo noma amakhasi okufika. Yiqiniso, lolu hlobo lwezixhumanisi aluhlangene nendawo yokucinga yokusesha ye-Google, okungenani ngokuqondile. Noma kunjalo, namanje kuyithuba elihle kakhulu hhayi nje ukwakha ezinye izixhumanisi ezingeziwe kodwa kufaka isandla ekwakheni isakhiwo sewebhu esiphezulu. Noma kunjalo, ukuguqula iwebhusayithi yakho noma ibhulogi endaweni efinyeleleka kalula futhi enobungane kungaba isinqumo esenziwe kahle. Ngemuva kwalokho, ungazuza kusikhundla esiphakeme sokubeka isikweletu isikhathi eside - ngenxa yokuthi isakhiwo sakho sewebhusayithi sisebenza futhi samukelekile kuwo wonke umsebenzisi aphuma ngaphandle.